Howlgalka AMISOM oo sheegay in ay sugi donaan amniga doorashooyinka dalka ka dhaca sanada 2016 – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
1st August 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Taliska howgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay ka go’antahay in ay sugaan amniga doorashooyinka dalka ka dhacaya sanada 2016 marka lagaaro.
AMISOM ayaa sidoo kale xusay in kaalin libaaxle ay ka ciyaari donaan in dalka Soomaaliya ay qabsoonto doorasho xor ah oo aminigeeduna suganyahay.
Taliska AMISOM oo hadalkooda sii wata ayaa sidoo kale sheegay in AMISOM ay si gaar uh u sugi doonto amniga xorumaha ay ka dhacayaan cod dhiibashada, madaama ay macquul tahay in AL-Shabaab ay isku dayaan in ay carqaladeyaan hanaanka doorashada dalka.
“ warkan qoraalka ah ee AMISOM ka soo baxay ayaa sidoo kale lagu yiri Ciidamada Midowga Africa ee AMISOM waxa ay u jogaan Soomaaliya in ay ka xoreyaan dagaalyahanda dhaq dhaqaaqa AL-Shabaab ee dalka ka dagaala, dalka Soomaaliya uu u noqdo goob amaankeedu suganyahay.
Hadalka AMISOM ayaa imaanaya xili sanada 2016 la filayo in dalka ay ka dhacdo doorasho ka balaadhan tii lagu soo doortay dowlada hada jirta lakiin doorashadu aysan noqon doonin mid hal qof iyo hal cod ah sida ay horay u sheegeen Madaxada dowlada federaalka Soomaaliya iyo danjirayaasha Qaramada Midoobay iyo Midowga Africa ee Soomaaliya.
Degmada Xudur oo lagu soo bandhigay Gaadiid iyo Rag la sheegay in ay ka tirsan yihiin Al Shabaab